Fikarohana momba ny firaisana Priyanka Chopra ho Reincarnation ny horonan-tsarimihetsika frantsay Vamp Musidora sy Nick Jonas ho Costar Fernand Herrmann: Fandrafetana ny fiainana mandritra ny Reincarnation - Fikarohana Reincarnation
Article by: Walter Semkiw, MD miaraka amin'ny fanampiana avy Karthik Ramaswamy
Ny fambara amin'ny androm-piainany lasa teo amin'ny Priyanka Chopra Jonas
Priyanka Chopra nandresy ny Miss World 2000 pageant hatsarana, izay nahatonga ny sarimihetsika sy laza, izay niafara ho lasa iray amin'ireo olo-malaza malaza ao India. Nanambady izy Nick Jonas, mpikambana ao amin'ny Jonas Brothers tarika mpihira, izay nahatonga an'i Priyanka nitovy laza tany Etazonia.
Koa satria ny fivavahana voalohany ao India, ny Hindoisma, dia manaiky ny reincarnation, ara-dalàna ny hanontany hoe iza i Priyanka, ary koa Nick, mety ho teo amin'ny fiainana taloha.
Nanontany momba an'i Priyanka sy Nick aho nandritra ny fivoriana iray niaraka tamin'i trance medium Kevin Ryerson, izay mandefa an'i Ahtun Re, toe-tsaina izay nanaporofo ny fahaizana mametraka ny lalao teo aloha dia manana mari-pahaizana tsara.
Ahtun Re nilaza tamiko fa i Priyanka dia mpilalao horonantsary sy talen'ny sarimihetsika frantsay mangina tamin'ny fiandohan'ny taonjato. Tamin'ny fotoana niarahanay tamin'i Kevin dia sahirana aho tamin'ny tranga hafa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hafa ary tsy nanokana fotoana hikarohana ity mpilalao sarimihetsika frantsay ity, izay toa takona amiko.
Priyanka amin'ny maha Reincarnation an'i Musidora
Volana maro no nandalo rehefa nifandray tamin'i Karthik Ramaswamy aho, Amerikana amerikana iray izay nanoratra tamin'ny heviny mikasika an'i Whoy mety ho nisy teo aloha.
Tsy nieritreritra aho fa manan-kery ny teoriny, saingy rehefa nahafantatra azy kely aho, dia nizara ny fampahalalana efa azoko momba an'i Priyanka ho ilay mpilalao sarimihetsika sady mangarahara frantsay mangina. Nanontany an'i Karthik aho, raha te handinika an'io fiainana taloha frantsay io izy, ary nanaiky ny hataony.
Tsy ela taorian'izay dia nandefa vaovao momba an'i Musidora i Karthik, izay mifanentana amin'ny famaritan'i Ahtun Re. Tamin'ny fotoam-pivoriana taorian'i Kevin, Priyanka tamin'ny fiainany taloha raha voamarina i Musidora.
Ny anarana nahaterahan'i Musidora dia Jeanne Roques ary teraka tamin'ny 1889 tao Paris izy. Nanomboka nilalao izy tamin'izy 15 taona. Tamin'ny taona voalohan'ny sinema frantsay dia niara-niasa tamin'ny talen'ny sarimihetsika manan-kery Louis Feuillade izy. Izany dia nitarika an'i Jeanne, izay nandray ny sehatra an-tsehatra, Musidora, mba hitarika andraikitra voalohany amin'ny andian-tsarimihetsika Les Vampires.
Ahtun Re sy ireo rakitsoratra Akashic
Raha amin'ny lafiny iray, rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho raha Musidora i Priyanka dia hoy aho fa nihaona tao Musidora Les Vampires. Nanampy aho avy eo hoe: “Heveriko fa sarimihetsika momba ny vampira ireny.”
Taorian'ny nanamafisany fa i Musyanka dia Musidora dia efa ela niainana, nilaza izany i Ahtun Re Les Vampires raha ny marina dia momba andian-jiolahy mpanao heloka bevava, fa tsy sarimihetsika momba ny vampira tena izy. Nilaza izy avy eo fa nanotrona ny ran'ny fiarahamonina ilay andiany.
Gaga aho raha nahalala an'io antsipirihany io i Ahtun Re ary nanontany hoe: "Ahoana no nahalalanao izany?"
Ahtun Re dia nanao izany imbetsaka tamin'ny fotoam-pianarako niaraka tamin'i Kevin, izay nihaonako matetika isam-bolana nanomboka ny 2001. Ahtun Re dia manana ny fahalalana fahalalana momba ny encyclopedia izay tsy mitsahatra manaitra ahy mihitsy.
Nanazava i Ahtun Re fa rehefa manontany momba ny olona iray aho dia mifantoka amin'ny lohahevitra izy ary ny fampahalalana momba an'io olona io dia tonga any aminy fotsiny. Ahtun Re dia mahay mamaky izay antsoina hoe Akashic Records na Universal Mind. Izy io dia firaketana ireo zava-nitranga rehetra izay mifototra amin'ny sehatra fanahy. Ahtun Re dia miditra amin'ny telefaona ity rakitsoratra ity.
Nick Jonas amin'ny maha Reincarnation an'i Fernand Herrmann
Nandritra io fivoriana io izay nanamafisan'i Ahtun Re fa Musidora dia Priyanka, nanontany aho raha tonga nofo i Nick Jonas nandritra ny androm-piainan'i Musidora. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa iray amin'ireo mpisehatra hafa i Nick Les Vampires.
Tahaka ny teo aloha dia nanontany an'i Karthik aho raha azony atao ny mahita an'i Nick. Karthik avy eo dia nijery fizarana fizarana maromaro tamin'ny Les Vampires. Taorian'izay dia nanoratra ho ahy izy ary nilaza fa ny mety ho mpirotsaka indrindra ho an'ny Nick Jonas Fernand Herrmann, lalao famerenana indray izay nohamafisin'i Ahtun Re.
Teraka tany Paris koa i Fernand Herrmann ary nilalao sarimihetsika 26 teo anelanelan'ny taona 1914 sy 1925, ny taona nahafatesany. Musidora dia maty tamin'ny 1967. Teraka 15 taona taty aoriana, tamin'ny 1982, Priyanka Chopra.
Musidora dia nanambady an'i Dr. Clément Marot nandritra ny 15 taona talohan'ny nisian'ny fisaraham-panambadiana. Tsy fantatro raha nanana fifandraisana manokana lehibe i Musidora sy i Fernand Herrmann nandritra ny fikarakarana matihanina, nefa tsy maintsy nifankahita izy ireo.
Ireo fanahy dia mamolavola fotoana maharitra hatrany amin'ny tontolon'ny fanahy mba hiarahana amin'ireo izay fantany, niara-niasa na tiana tamin'ny fiainany taloha. Ny porofo mafy orina indrindra momba ny drafitra mandritra ny fotoana maharitra dia avy amin'ny fanadihadiana Twin izay tarihin'i Ian Stevenson, MD, mpitsabo aretin-tsaina eo amin'ny University of Virginia. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Manomana fiainana mandritra ny androm-piainana: Ian Stevenson Twin Study
Raha hijery ireo tranga hafa mahasosotra fialamboly, dia alaivo:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana hita eo amin'ny endrik-tsehatra ao amin'ny Musidora | Priyanka sy Fernand Herrmann | Nick Jonas.
Mino aho fa ny fisehoana ara-batana dia araky ny maodelin'ny angovo natolotry ny fanahy ho ao amin'ny zaza am-bohoka sy ny zaza mivoatra, izay mahatonga ny maritrano ho an'ny tarehy dia mitovitovy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa, na dia mety manova endrika aza ny lova voajanahary.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Mpikatroka i Musidora sy Fernard, toa an'i Priyanka sy Nick.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Araka ny efa voalaza teo aloha, nifankafizin'i Musidora sy i Fernand teo amin'ny fiainan'i Nick sy Priyanka.
Fiovam-pirenena: Frantsay i Musidora sy Fernand, raha i Priyanka dia teraka tany India ary i Etazonia dia teraka tany Etazonia.
Ny fahatakarana fa ny olona dia afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firazanana amin'ny firazanana iray mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy ny tontolo ho toerana milamina kokoa satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo. Ny tranga iray lehibe amin'ity lafiny ity dia:
Ny tranga Reincarnation miaraka amin'ny fanovana ny finoana sy ny firenena